I-Facebook yethule izibuko zayo ezingathandwa kwabathelisi esikubona | Kusuka kuLinux
I-Facebook yethule izibuko zayo ezingathandwa kwabathelisi esikubona
Cabanga ngomhlaba onamabhangqa amabili ukukhanya nenhle buyisela isidingo sekhompyutha noma i-smartphone. Lezi zibuko zizoba namandla okuzizwa zikhona ngokomzimba nabangane nomndeni, noma ngabe uzobe ukuphi emhlabeni, nokuqonda okwenziwe ngokwazi komongo ukusiza kanye nemininingwane ebonakalayo ye-3D ezandleni zakho.
Okuhle kunakho konke ukuthi, bazokuvumela ukuthi ubheke phezulu futhi uhlale ukhona emhlabeni okuzungezile kunokuba uphendulele ukunaka kwakho emaphethelweni entendeni yesandla sakho. Le yidivayisi engeke ikuphoqe ukuthi ukhethe phakathi kwezwe langempela nezwe ledijithali ...
Ubuchwepheshe obunjalo abuyikuba yimishini engahlelekile ezokukhipha emhlabeni wangempela futhi ikuyise ezweni ledijithali, kepha izosebenza nomuntu ngendlela ehlanganisa amaqiniso womabili ngaphandle koshintsho oluphazamisekile.
“Kufanele bakwazi ukwenza lokho ofuna bakwenze futhi bakutshele lokho ofuna ukukwazi lapho ufuna ukwazi, ngendlela efanayo naleyo esebenza ngayo ingqondo yakho: yabelana ngolwazi ngokushelela futhi uthathe isinyathelo lapho uthanda. bangahambi ngendlela yabo ngenye indlela, ”kusho i-FRL.
Usosayensi omkhulu we-Facebook uMichael Abrash uchaze que lolu hlobo lokuxhumana nobuchwepheshe lungenye yezinkinga ezinzima kakhulu ukunqoba.
I-AR "ehlala ivuliwe", ithe izoba enembile, lokhu akubize ngokuthi ukwelula umzimba. Uma lokhu kwenzeka, uthi, abagqokayo ngeke bazi ukuthi bagqoke izibuko ngenkathi bezigqokile futhi bexhumana nabanye abantu ngasikhathi sinye.
Isibonelo sanikezwa ngomuntu ogqoke izingilazi ze-AR ezihlanganiswe nentambo yesandla esithambile. Bangena esitolo sekhofi futhi umsizi obonakalayo ubuza lo mbuzo, "Ngabe ufuna ngitole i-12-ounce American?" Kuzodingeka kuphela ukuchofoza ngomunwe wakho ukukhetha yebo noma cha. Lokhu yilokho i-FRL ekubiza ngobuchwepheshe obusebenzayo, kunokuba busebenze.
I-FRL iqhubeka ichaze ukuthi uma ikhofi selithengiwe futhi umuntu ehlala phansi etafuleni, bagqoka amagilavu ​​amancane we-haptic. Isikrini esibonakalayo sibonakala ngokushesha ngezibuko, kanye nekhibhodi ebonakalayo. "Ukuthayipha kunembile njengokuthayipha ikhibhodi ephathekayo bese ubhala iroli, kodwa umsindo wekhofi wenza kube nzima ukugxilisa ingqondo," kusho i-FRL. Ngakho-ke, kuncishiswa umsindo kubuchwepheshe, obuqonda izidingo zomuntu osemvelweni.
Ukunikeza ama-oda ngaphandle kobuchwepheshe kuyacasula kakhulukusho i-FRL, usebenza ku-electromyography esuselwe esihlakaleni. Lokhu qapha amasiginali kagesi ezihamba zisuka entanjeni yomgogodla ziye esandleni, ezizolawula imisebenzi yento esuselwa ekuhumeni esihlakaleni. "Amasiginali esihlakaleni acace bha kangangokuba i-EMG ikwazi ukubona ukunyakaza kweminwe yemilimitha eyodwa nje kuphela," kusho i-FRL.
UMphathi Omkhulu uMark Zuckerberg ukuxoxile lokhu engxoxweni abe nayo neThe Information ngoMsombuluko. Uthe lobu buchwepheshe bungasetshenziselwa "ukusebenzisa i-teleport" abasebenzisi emakhaya noma emahhovisi abanye abantu, wengeza ngokuthi uyakholelwa ukuthi lobu buchwepheshe bunganciphisa ukuhamba futhi bunciphise nomthelela wokufudumala komhlaba.
"Esikhundleni sokubiza umuntu noma ukuxoxa ngevidiyo, umane uqhafaze iminwe yakho bese uthumela i-teleport, futhi uhleli lapho futhi basembhedeni wabo futhi kuba sengathi babekhona ndawonye," kusho uZuckerberg.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Facebook yethule izibuko zayo ezingathandwa kwabathelisi esikubona
UDavid Plummer, owayengunjiniyela weMicrosoft waqhathanisa iLinux neWindows